Baccalaureate-ka Caalamiga ah (IB) - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Barnaamijka Sannadaha Dhexe ee IB (IB MYP)
Ujeeddada dhammaan barnaamijyada IB waa in la horumariyo dadka maskaxda ku haya adduunka, kuwaas oo, aqoonsanaya dadnimadooda guud iyo wadaagga ilaalinta meeraha, gacan ka geysanaya abuuritaanka adduun ka wanaagsan oo ka nabdoon. Barnaamijka Caalamiga ah ee Baccalaureate Sanadaha Dhexe (IB MYP) waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasalka 6aad ilaa 10aad. IB MYP waxaa laga bixiyaa Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale iyo Dugsiga Sare ee Cooper.
Ardayda dhigata MYP waxay bartaan dhammaan maadooyinka waaweyn, oo ay ka mid yihiin Luqadda iyo Suugaanta, Shakhsiyaadka iyo Bulshooyinka, Sayniska, Xisaabta, Farshaxanka-Muuqaalka iyo Waxqabadka, Naqshadeynta, iyo Barashada Jirka iyo Caafimaadka. MYP waxay dooneysaa inay ka caawiso ardayda inay xiriir la yeeshaan anshaxa si ay u siiso aragti ballaaran, waxayna ku dhiirigelinayaan inay si firfircoon uga qaybqaataan bulshadooda.
Barnaamijka Dibloomada IB (IB DP)
Barnaamijka Dibloomada (DP) waa manhaj adag oo laba sano ah oo loogu tala galay ardayda dhigata fasalada 11aad iyo 12aad waxaana lagu bixiyaa dugsiga sare ee Cooper .
Ardaydu ma bartaan oo keliya macluumaadka lagama maarmaanka u ah in lagu dhammaystiro maaddo kasta, laakiin sidoo kale waxay bartaan sida loola macaamilo macluumaadka cusub iyo xaaladaha ka jira aagaggaas. Barnaamijka IB wuxuu barayaa:
weydii su'aalo adag
baro sida wax loo barto
kobciyaan dareen adag oo ah aqoonsigooda iyo dhaqankooda
horumariyo awoodda lagula xiriiro iyo fahamka dadka ka yimid waddamada iyo dhaqamada kale
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo websaydhka Dugsiga Sare ee Cooper.